Ganacsiga Hubka Sharci-darrada Ah Ee Dawladda Djibouti Ku Daabulay Puntland : Warbixin | Araweelo News Network | Araweelo News Network
Ganacsiga Hubka Sharci-darrada Ah Ee Dawladda Djibouti Ku Daabulay Puntland : Warbixin
London(ANN)-Ganacsiga hubka sharci-darrada ah ee laga daabulayo Dekedda Doraleh ee dalka Djibouti oo dhinaca maamul goboleedka Somalia ee Puntland loo gudbinayo, ayaa lagu tilmaamay mid khatar dhigaya amniga gobolka.
Sida lagu sheegay warbixin lagu daabacay Bogga hore ee Khatarta Ganacsiga,( https://www.exxafrica.com/) saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda Djibouti, ayaa lala xidhiidhiyay ku lug-lahaanshaha ganacsiga hubka, iyadoo warbixinta lagu sheegay in dekedda Doraleh oo ay maalgelin ku samaysay DP World, balse hadda ay gacanta ku hayso dawladda Djibouti uu kordhay mudadii ay Dp World faraha kala baxday maamulka dekedda, waxayna warbixinta oo soo xiiganaysa ila wareedyo kala duwan xaqiijisay in uu sii kordhayo qulqulka hubka sharci-darrada ah, kaasoo loo dhoofinayo sida badeecaddaha dharka, isla markaana ku waajahan xeebta koonfur bari iyo mashruuca dekedda Garacad.
Dhowrkii sannadood ee la soo dhaafay, Shirkadda DP World ayaa adeegsanaysay terminaalka Doraleh, iyadoo xiligaa aan loo isticmaalin ka ganacsiga hubka, balse sirdoonka maxalliga ah ayaa ka digaya in gabi ahaanba mustaqbalka laga dhigo xarun ganacsiga hubka sharci darrada ah, maadaama ay hadda gacanta ku hayso dawladu.
Guddoomiyaha Djibouti Ports and Free Zone Authority (DPFZA), Aboubaker Omar Hadi, oo saaxiib dhow oo ah Cali Cabdi Aware, oo ah ganacsade caan ah oo kasoo jeeda deeganka Puntland, isla markaana aan ka madhnayn siyaasada oo saddex jeer musharax madaxweynenimo u tartamay maamul goboleedka Soomaaliya ee Puntland, ayaa warbixinta lagu muujiyay inay si wadajir ah ugu lug leeyihiin hawlahaa, iyadoo Ganacsade Aware uu shakhsi ahaan mas’uul ka yahay(CAC Internationa Bank) oo uu leeyahay madaxweynihii hore ee dalka Yemen Ali Abdallah Saleh.
Baankaa oo xaruntiisu tahay DJibouti saraakiil hay’addaha sirdoonka maxaliga ah waxay sheegayaan in Omar Hade uu ka caawiyay diiwaangelinta baanka iyo ganacsatada saamiyada ku leh (“qayb ka mid ah qaybaha maalgashiga”). Intaa waxaa dheer, Cumar Hadi wuxuu abuuray laanta bangiga ee Boosaaso kaas oo lacag ka dhigi kara hay’addaha dhulka hoostiisa ah, taas oo la xidhiidha soo dejinta hubka laga soo dejiyo Yemen, maadaama bangigu uu ka yimi dhinaca dalka Yemen.
Ganacsade Cali Cabdi Aware, wuxuu sidoo kale si wanaagsan uga qayb qaatay dhismaha xukuumadda Madaxweyne Geelle, isagoo ahaa ninkii qorsheeyay kaalmadii Puntland ugu deeqday Djibouti markii sanando ka hor ay dagaalyahanada Eritrea ee ka soo horjeeda qabsadeen Jaziirad la mooda Doumeira, iyadoo maxaabiistii dagaalkaa lagaga qabsaday dawladda Djibouti ay weli haysato Eritrea.
Shirkadda hubka ka gacansata oo magaceedu yahay Company Z, oo ay leedahay qoyska Geelle, ayaa ka shaqaysa ganacsiga hubka soo dejinta Soomaaliya, waxaana hubkaas loo qaybiyaa qaybo ka mid ah hoggaamiyayaal siyaasadeed oo ay taageeraysp dawladda., iyadoo Doraleh ay door muhiim ah ka qaadato ka ganacsiga hubka ee gobolka.
Sirdoonka maxaliga ahi waxay soo jeedinayaan in dekedda Djibouti ee muhiimka ah aanay ahayn mid amniga ah iyo nidaamyada dheddig-dhaqameedku ay yihiin kuwo sahlan, taas oo fududeyneysa soo iibsiga sharci-darrada ah. Hase-yeeshee, tan iyo markii baadhitaanka caalamiga ah ee duullimaadyada xamuulka laga sameeyay halkaa, taas oo xaddidaysa isticmaalka dekedda sida xarunta ganacsiga hubka, balse ilo xogogaal ah ayaa sheegaya in inta badan ganacsiga hubka sharci-darrada ah aanu u baahneyn in loo wareejiyo dekedda ugu weyn ee Djibout. Waxaa loo wareejiyey dharka yaryar iyada oo loo marayo bulshooyinka kaluumeysiga ee xeebaha koonfur bari ee Soomaaliya.
Intaa waxaa dheer, Djibouti ayaa sidoo kale ku lug leh dhismaha dekedda Garacad ee dhinaca bariga ee Puntland, waxayna Djibouti raacday siyaasad khilaaf siyaasadeed oo ku aadan xukuumadda Soomaaliya, taas oo la xidhiidha Eritrea iyo Ethiopia ka dhalatay shirkii u dhaxeeyay madaxweynaha Soomaaliya iyo dhiggiisa Afewerki ee Asmara. sidaa awgeed Djiboutii ayaa ka faa’iideysanaysa khilaafka Puntland ee ka dhaxeeya xukuumadda Soomaaliya, waxaana halka ay ku taal dekedda Garacad oo Ra’iisal Wasaare Xasan oo dhawaan booqday gobolka Puntland lagu martiqaaday furitaanka mashruuca Garacad laakiin wuxuu diiday inuu tago, waxaana sidoo kale lagu beegay smashuuraca Garacad markii xukuumadda Soomaaliya ay dhawaan bilaabeen qorshaha dhismaha dekedda Hobyo.
Sidoo kale, waxa jira xiisado baddan oo u dhexeeya xukuumadda Soomaaliya iyo Djibouti markii ay soo baxday in ay ku lug leeyihiin mashruucan. Sidaa awgeed xukuumadda Soomaaliya ay si xun uga welwelsan tahay Djibouti, iyada oo loo adeegsanayo goob saldhig u ah hubka ka soo galaya Gacanka Cadmeed ee imanaya Puntland kadibna dhinaca Soomaaliya u talaabaya, taas oo kooxaha siyaasada ee Soomaaliya iyo Al-shabaab faa’ido u ah. Sidoo kale, Garacad waa meel ku haboon soo dejinta hubka sharci-darada ah iyo tahriibinta ganacsiga aan sharciga ahayn, iyada oo ay ahayd dhulka budhcad-badeedka laga soo bilaabo 2008 – 2011.
Waxay ku taallaa Garacad meel door weyn ka ciyaarta ka ganacsiga hubka ee gobolka. Shirkadaha saadka, maraakiibta iyo dhismaha ee ku lugta leh Mashruuca dekedda Garacad waxaa badanaaba leh mas’uuliyiin dawladda Djibouti ah iyo saraakiil millatari. Inta badan qalabka dhismaha ee mashruuca waxaa laga dhoofin doonaa xeebta Djibouti, waxaana la geeyaa xeebta Garacad. Waxaa jira fursado balaadhan oo loogu talogalay tahriibinta hubka. Mar labaad, Kooxda Kormeerayaasha ee QM ee gobolkaan ayaa sheegaya hay’addaha sirdoonka maxalliga ah ee soo jeedinaya warbixinahaa inay weli sax yihiin.